Momba anay-Shenzhen Junankang Medical Technology Co., Ltd.
Shenzhen Junankang Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny Aogositra 2004. Orinasa matihanina natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famokarana vokatra ara-pitsaboana marani-tsaina. Orinasa teknolojia avo lenta manambatra ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy.
Ny vokatra lehibe dia: rafitra fitantanana fanadinana ara-batana manan-tsaina, tobim-pahaleovan-tena (volafotsy Yitong), Yizhangtong, ivon-toerana fanaovana pirinty ho an'ny hopitaly, sarimihetsika ara-pitsaboana vaovao (laser, thermal, inkjet), sarimihetsika rahona elektronika, sarimihetsika ara-pahasalamana Toy ny mpanonta sary ( laser, thermal, inkjet), mpaka sary miompana amin'ny tena. Tamin'ny 2015, nahazo fampiasam-bola stratejika avy amin'ny renivohitra renivohitra fanta-daza Xiantong Capital izy. Tamin'io taona io ihany dia nahazo fampiasam-bola avy amin'ny birao siansa sy teknolojia any Shenzhen izy.
Ny orinasa dia manana patanty famoronana nasionaly maro, patanty modely ilaina, patanty famolavolana, zon'ny mpamorona lozisialy ary zon'ny mpamorona mari-barotra. Miaraka manana fahazoan-dàlana roa momba ny fahazoan-dàlana hamokatra fitaovana fitsaboana sy fahazoan-dàlana ho an'ny raharaham-barotra, dia ny National Foundation for Poverty Alleviation, Primary Health Care Foundation, mpiara-miombon'antoka Strategic Shenzhen an'ny orinasa iraisam-pirenena sy anatiny fanta-daza toa ny Mindray Medical, Shenzhen ZTE, Shanghai United Ny sary, sns, dia manana Hopitalin'ny Vondrom-paritany Henan, Hopitaly Zhengzhou People's, Hopitaly People People's, Hopitaly Affiliated University of Hebei, Hopitaly General Shenyang Army, Distrikan'ny Vondrom-bahoakan'i Shenzhen Bao Hopitaly Ny hopitaly, ny hopitaly Hainan Sanya People, ny hopitalin'ny olona ao Jiujiang City, ny hopitaly Zibo Central ary ireo andrim-pitsaboana an-jatony maro manerana ny firenena dia mpanjifa kalitao.
Ny milina takelaka fanompoana an'ny tenany an'ny orinasa 2019 dia nahazo ny marika folo ambony an'ny milina fitsaboana tena avy any Sina.
Ampiasaina amin'ny fikarakarana raharaham-pitsaboana sy hopitaly marary (milina fandokafan-tena yinyitong), fikarakarana raharaham-barotra ho an'ny sampana mpitsabo, fanontana tatitra ary famatarana (milina fandinihan-tena fizahana tena); ampiasaina amin'ny sary X-ray handraketana sary radiografika ho an'ny diagnostika klinika (sarimihetsika ara-pitsaboana); ampiasaina miaraka amin'ny sarimihetsika ara-pitsaboana ho an'ny tena Sarimihetsika fanontana printy sy fampiasana tatitra (mpaka sary mihetsika amin'ny tena, mpanonta pirinty
3C taratasy fanamarinana, fanamarinana teknolojia avo lenta, patantin'ny famoronana, zon'ny mpamorona lozisialy, firaketana momba ny famokarana fitaovana fitsaboana, fahazoan-dàlana momba ny fitaovana fitsaboana
Eken'ny China National Foundation for Poverty Alleviation, Primary Health Care Foundation, Shenzhen Mindray Medical, Shenzhen ZTE, Shanghai United Imaging, sns mpiara-miasa stratejika amin'ny orinasa sy andrim-panjakana malaza, miaraka amin'ny Hopitaly Henan Provincial People, Zhengzhou Peopleâ Hopitaly, Hopitaly People People's Hospital, Hopitaly Hebei Engineering University, Hopitaly General Shenyang Army, Hopitaly Distrikan'i Shenzhen Bao, Hopitaly Hainan Sanya People's, Hopitaly People Jijuang City, Mpanjifa tsara kalitao avy amin'ny toeram-pitsaboana an-jatony manerana ny firenena toa ny hopitaly Zibo Central. Tamin'ny taona 2019, ny milina takelaka fikotranan-tenan'ilay orinasa dia nahazo ny marika 10 milina mpitsabo tena misahana tena ara-pahasalamana China.